Yini Ongangitshela Ngayo I-SEO yeNkampani Yokuphatha Impahla?
Lezi zinsuku, i-SEO ibalulekile kuzo zonke izinhlobo zamabhizinisi ase-intanethi, futhi i-agency yokuphathwa kwe-inthanethi ayiyona into ehlukile. Uma ufuna ukukhulisa inkampani yakho yokuphathwa kwempahla, ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuba ufake i-SEO kumasu wakho wokuthengisa we-digital.
Ku-Semalt, sisebenza njalo emibonweni engcono yokumaketha yewebhu yamabhizinisi wokuphatha impahla. Namuhla, sizokwabelana ngezindlela eziphumelela kakhulu zokuthuthukisa i-SEO yakho. Lezi zincomo zizokusiza ukuguqula izivakashi zakho zewebhusayithi zibe yiziqondiso eziqinile.
Qaphela Imenyu Yakho Imenyu
Into yokuqala esiyifuna ukuxoxa ngayo isakhiwo sakho sekhasi langaphambili noma ngamanye amagama izinto zakho ze-website. Khumbula, badinga ukuhlanzeka, kucacile futhi kufinyeleleke. Indlela engcono kakhulu yokuhlela ikhasi lakho langaphambili lekhasi ukulihlukanisa zibe izinto ezine zemenyu eyinhloko. Ochwepheshe be-Semalt basikisela ukubeka lezi ezilandelayo ekhasini lokuqala:
Izinsizakalo Zokuphathwa Kwendawo.
Umgomo oyinhloko lapha ukuthuthukisa ithrekhi yakho ngokunciphisa izinga lokunciphisa futhi ukwandisa isikhathi esichithwa kwisayithi lakho. Kufanele uqonde ukuthi kunezinqwaba zabantu abavakashela isayithi lakho nsuku zonke. Bonke bafuna ukuthi kube mnandi futhi kulula ukuhamba. Yingakho kubalulekile ukuhlinzeka abasebenzisi ngezikhombandlela ezilula. Khumbula, uma usakaza umsebenzisi ngamunye endaweni edingekayo yewebsite, kunamathuba aphezulu ukuthi azochitha isikhathi esiningi lapho kunokushiya imithombo yakho.
Uma ufuna ukufaka ezinye izinto zemenyu, ezifana nobuhlobo bezindaba, kulungile. Into okumele uyikhumbule: zama ukugcina lezo zinto kwamanye amamenyu amancane ngaphakathi kuwebhusayithi yakho. Njengoba sishilo ngenhla, ikhasi lakho eliphambili kumele libe lihlanzekile futhi kulula ukuhamba, ngangokunokwenzeka.
Imibuzo yokwakhiwa kwe-URL
Ukuthuthukisa isakhiwo se-URL samasayithi kuwo wonke amakhasi ewebhu njalo isinqumo esihle. Ama-URL akho kufanele abe mncane futhi achaze. Khumbula ukuthi uma ama-URL akho enza umqondo futhi akhombise inani lenkampani yakho, izinjini zosesho zingakuthola ngokushesha futhi uthole ukuthuthukiswa kwe-SEO elula.
Gxila ekhasini lakho lokufika
Kufanelekile ukuphawula ukuthi amathuba amaningi ebhizinisi lakho ageleza ngokuqondile kuleli khasi. Ngakho-ke, kufanele wenze kube kuhle kakhulu. I-SEO ochwepheshe ichaza izinto ezintathu okufanele ube nazo kuleli khasi ukuze wenze inkampani yakho yenkampani ivezwe esixukwini. Nazi ezinye izihloko:
Nakuba lokhu kungase kubonakale kuyabonakala, ungamangala ukuthi mangaki amakhasi okufika angenayo iziqu, okungalungile. Ake sicabange ukuthi uyinkampani yokuphathwa kwempahla eFlorida, kanti isihloko se-SEO-esiphezulu sekhasi lakho lokufika kufanele libe njengokufana neFlorida Property Management Agency.
Abathengi bakho abazokwazi ukukufinyelela ngokushesha, ngakho qiniseka ukuthi inombolo yocingo kubonakala. Ungayifihleli, esikhundleni salokho uyibeke ngaphansi kwesihloko sakho, ukuze abantu bakwazi ukuxhumana nawe emayelana nemizuzwana.
Ifomathi Yokuxhumana Yokwezifiso
Kubalulekile ukunikeza abasebenzisi enye indlela ngaphandle kwefoni abangakwazi ukuxhuma nawe. Cabanga ifomu lokuxhumana elinamasimu angu-4-5. Buza izivakashi ngolwazi oluyisisekelo, ngakho kulula ngabo ukunikeza ulwazi lwabo.
Ungaqala ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho yenkampani yokuphathwa kwempahla okwamanje nalezi zeluleko ezintathu ze-SEO. Uma usuqedile nabo, ungaqhubeka ngokufakazela ubufakazi bese ufaka i-ejenti yakho kwividyo echazayo Source .